Ny AirPods Max amin'ny 415 euros fotsiny amin'ny Amazon | avy amin'ny mac aho
La zava-dehibe voalohany Mifandraika amin'ny vokatra Apple sasany izay avy amin'ny tanan'ny varotra tamin'ny Janoary dia ho hitanao ao amin'ny AirPods Max izany. Ny vidin'ny Apple AirPods Max mahazatra dia 629 euros, vidiny ahafahantsika mividy azy mivantana ao amin'ny Apple Store.
Fa raha tiantsika vonjeo izahay mihoatra ny 200 euros, afaka manararaotra ny tolotra misy amin'izao fotoana izao amin'ny Amazon isika ary mahazo azy ireo 415 euro fotsiny, izay a Fihenam-bidy 34% amin'ny vidiny mahazatra, izay araka ny nambarako dia mihoatra ny 600 euros.
Tsy toy ny tolotra teo aloha amin'ity maodely headphone ity izay navoakanay tao amin'ny News iPhone, Ity tolotra ity dia misy amin'ny 4 amin'ny loko 5 izay misy azy: habaka volondavenona, volafotsy, maitso ary mavokely.
Ny modely manga manga, na dia amidy ihany koa, tsy nahatratra ny vidiny farany ambany indrindra ara-tantara ny loko hafa. Toy ny mahazatra, ity fitaovana ity amin'ny vidiny dia misy amin'ny vondrona voafetra ary miaraka amin'ny fandefasana andro manaraka.
Famaritana ny AirPods Max
Miaraka amin'ny AirPods Pro, ny AirPods Max dia ny headphone Apple hafa ahitana rafitra fanafoanana ny tabataba mavitrika izay mamela antsika hitokantokana tanteraka amin'ny tontolo iainantsika. Ao anatiny dia mahita ny chip H1 izahay, mifanaraka amin'ny feo spatial, misy ny fampitoviana adaptive ary i Siri dia eo am-pelatananay foana.
Raha resaka fizakan-tena, ny AirPods Max manolotra antsika hatramin'ny 20 ora fampiasana tsy tapaka miaraka amin'ny fanafoanana ny tabataba mavitrika na ny maody feo ambient navitrika. Miaraka amin'ny AirPods Max dia hahazo ihany koa ny Smart Case izay manetsika ny fomba fitsitsiana herinaratra faran'izay ambany sy ny tariby tselatra hamenoana azy ireo.
Vidio ny AirPods Max amin'ny 415 euros amin'ny Amazon.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny AirPods Max amin'ny 415 euros fotsiny amin'ny Amazon